China S168 Silicone Sealant Weather-resistant Adhesive Construction Weather-resistant seal for exterior wall, roofs, doors and windows fekitari uye bhizimisi | DESAY
S168 Silicone Sealant Weather-resistant Adhesive Construction Weather-resistant seal yemadziro ekunze, matenga, madhoo nemahwindo
S168 silicone sealant chinhu chimwe chete-chikamu chemvura inopora, yepakati modulus, yakanaka mamiriro ekunze
Inonyanya kushandiswa kune yakasarudzika yekuisa chisimbiso zvinangwa, inokodzera kusavhara isina mvura kwemaindasitiri uye zvivakwa zvakajairika
S168 technical Index
Glue (yakaedzwa pa 23 ° C, 50% RH)
Giravhiti yakatarwa: 1.4 ~ 1.5 g / cc yakayerwa pa 23 ℃
Kuwedzera chiyero: 280ml / min GB / T13477.3
Pamusoro kuomeswa nguva (chigunwe kubata nzira): 20min min GB / T13477.5
Kuporesa kumhanya: Inenge 2mm 23 ℃ x50% RH, kutanga 24h
Mushure mekurapa (kurapa pa23 ℃, 50% RH kwemazuva makumi maviri nemasere)
Tensile Simba:> 1.0MPa GB / T13477.8
Tensile modulus: 0.5MPa GB / T13477.8
Elongation pabreak: Inenge 150% GB / T13477.8
Kwakaomarara kudzora chiyero:> 95% GB / T13477.17
Kuoma (Mhenderekedzo A): Inenge 45A GB / T531.1
Inoshanda tembiricha: -65 ～ 150 ℃
1. Kuiswa chisimbiso kwemamiriro ekunze kwekuvaka ekunze kwemadziro, matenga, madhoo nemahwindo.
2. Kuiswa mucherechedzo kwekubatsira kwejoinhi pakati penzvimbo yekuchengetera yekunze netangi.
3. Kuiswa chisimbiso kwemukati meHVAC chiteshi.
1. Bvisa putty, ngura uye mvura kubva munzvimbo yakanamirwa.
2. Sarudza yakakodzera cushion zvinhu kuti uzadze musoni zvinoenderana nesoni dhizaini.
3. Kuti glue rirambe rakatsetseka uye rakanaka, rinovhara masking rinogona kusungirirwa pamativi ese eganda kudzivirirwa,
uye iyo yepamusoro inofanira kudimburwa uye kusvuurwa pamberi peglue isina kusvuurwa.
1. Nekuda kwemusiyano wezvinhu uye nharaunda dzakasiyana dzekuvaka, zvinokurudzirwa kuita edhesion bvunzo pane yekuvaka nharaunda uye substrate kuve nechokwadi chaicho chekubatanidza zvinangwa.
2. Pasi pemamiriro ekunyanyisa ekushandisa, senge tembiricha yakakwira, mwando wakakwira, pH yakakwira, kunyudzwa kwenguva refu mumafuta kana mvura, nezvimwe, iko kushanda kunofanirwa kuyedzwa kusati kwaiswa.
3. Kuisa glue pane yakaderera tembiricha pazasi 5 ° C kana zvinhu pamusoro tembiricha inodarika 50 ° C zvinokanganisa kwekupedzisira kunamatira, uye kuenderera nekungwarira.
4. S168 inoshandiswa nehungwaru mumamiriro ezvinhu anotevera:
● Nzvimbo dzese dzinoonekwa dzinogona kubuda mafuta, mapurasitiki kana zvinonyungudutsa.
● Kuora kana kuora kunogona kuitika pamusoro pesimbi yesimbi.
Matipi Ekuchengetedza: Ndokumbirawo kuti muverenge iro rakakodzera chigadzirwa chengetedzo ruzivo mune chigadzirwa MSDS nokungwarira usati washandisa. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota nyorera Qingdao Lida Chemical Co, Ltd. kana kuitora kubva kumumiriri wekuparadzira.
Apex 300ml / epurasitiki chubhu 590ml / nyoro rutsigiro
Colors: nhema / chena / grey matatu akajairwa mavara, akagadzirwa akasarudzika mavara.
Kuchengetera: Uncured adhesive inonzwisisika kune yakanyanya tembiricha uye yakakwira mwando nharaunda, ndapota chengetera munzvimbo yakaoma uye inotonhorera nzvimbo. Nguva yekuchengetera pasi pehomwe yepakutanga ndeyemwedzi gumi nembiri.
Zvese zviri pamusoro chigadzirwa chigadzirwa ruzivo, kusanganisira iyo tsananguro pane chigadzirwa kurongedza,
ruzivo rwakakurudzirwa uye zvimwe zvirevo zvinovakirwa pabvunzo dzemarabhoritari uye kufungidzirwa.
Tinotenda kuti zvirevo izvi ndezvechokwadi uye zvakavimbika, asi isu hatisi ivo vechokwadi nezvechokwadi che data.
Kuvimbika kunovimbiswa mune chero chimiro. Nekuda kwekusiyana kwenzvimbo dzekushandisa uye dzakasiyana nzira dzekushandisa,
vashandisi vanofanirwa kuita pre-bvunzo zvinoenderana nemaitiro avo ekushandisa uye mamiriro ekushandisa kuona kuti zvigadzirwa
akakodzera kune chaiwo mashandisiro. Uye zvakare, isu hatiite chero kumiririra, mazano kana vimbiso nezve yakanangana nekushandisa uye
kushandiswa kwekutengesa kwezvigadzirwa. Chero kutengesa kweichi chigadzirwa kunofanirwa kuitiswa zvinoenderana nemitemo yekutengesa yeARARAR,
kunze kwekunge LEDAR yaratidza kuti yaita chikanganiso chakakura kana hunyengeri, LEDAR haizove nemhosva yeruzivo rwepamusoro kana chero
mamwe mazano emuromo.
Pashure: Mvura base bepa chubhu yakakosha glue
Zvadaro: Transparent isapinda glue
Customized Clear Anti Mhute Plastic Protective Me ...
A + mhando yakakwira yakasimba chena glue isina waya inosunga ...